Morontsiraka Kolombia amin'ny moron'ny Seine
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Morontsiraka Kolombia amin'ny moron'ny Seine
Nanomboka ny 26 hatramin'ny 30 Jolay, ProColombia sy Marca País dia mitondra ny hafaliana, mozika ary tsiro an'i Colombia mankany Paris Plages, hetsika fahavaratra ho an'ny Parisianina sy mpitsidika, eo afovoan'ny City of Light. Ny ao ambadiky dia ny Champins Elysees.
Mandritra ny dimy andro, ny Parisians sy ny mpizahatany dia ho afaka mankafy ny loko sy ny fifaliana amoron-dranomasina Kolombiana eo amoron'ny renirano Seine, eo afovoan'i Paris. Ny morontsiraka #Colombiamiamor dia hitatra 100 metatra, eo anelanelan'ny tetezana Les Invalides sy Almà.
Paris Plages dia iray amin'ireo daty fahavaratra mahazatra indrindra eo amin'ny Parisianina. Hatramin'ny 2002, isaky ny fahavaratra, ny moron'ny Seine dia nanjary tora-pasika artifisialy, vonona hampiantrano mpizahatany sy fialamboly.
“Taona Colombia ho an'ny fampiroboroboana iraisam-pirenena io. Manaraka akaiky ny fizotry ny fanovana antsika izao tontolo izao ary ny Taona France-Colombia dia porofon'ny fahalianana misy amin'ny tolotra ara-kolontsaina sy fizahan-tany ao amin'ny firenena, ary koa ny fahafaha-miasa misokatra noho ny fizotran'ny fandriam-pahalemana. ProColombia dia namolavola fandaharam-potoana tena lehibe amin'ity antsasaky ny taona ity, hanohanana ireo mpandraharaha Kolombiana eo amin'ny tsena frantsay.
Paris Plages dia seho tsy manam-paharoa, fa ho eo ihany koa izahay amin'ny hetsika hafa toa ny Salon du Chocolat; Fandraharahana ara-barotra miaraka amin'ireo mpandraharaha Kolombiana 200 sy mpandraharaha 200 any Paris, ary hiaraka amin'ireo mpandraharaha avy any amin'ny faritr'i Kolombia koa izahay amin'ny hetsika lehibe fampiroboroboana ny fizahantany ”, hoy i Felipe Jaramillo, filohan'ny PROCOLOMBIA.
Ny morontsirak'i Kolombia dia hozaraina ho toerana sivy samy hafa, izay ahafahan'ny mpitsidika mankafy santionany amin'ny kolontsaina sy ny safidy Colombiana, toy ny famakiana boky tsara nataon'i Gabriel Garcia Marquez nipetraka teo am-pandriana amam-baravaran'ny Eiffel Tower, na nankafizin'ny mozika any ambanivohitra, ary mianatra mandihy salsa aza miaraka amin'ireo mpampianatra tsara indrindra amin'ity gadona ity.
Ny vokatra isan-karazany nafarana avy any Kolombia dia hahafahan'ny mpitsidika any amoron-dranomasina hahafantatra ny sasany amin'ny vokatra atolotry ny firenena azo aondrana toy ny akanjo fandroana, kosmetika ary asa-tanana avy amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena, ankoatry ny fanandramana fanandramana sakafo, voankazo hafakely ary ranona voajanahary hamonoana ny hetahetan'ny fahavaratra any Paris. Ny kely kokoa koa dia hampifaly ny tenany amin'ny lalao kolombiana nentim-paharazana toy ny 'La rana', ary koa ny sehatra iraisana ahafahana mandoko.
Hotokanana ny 26 Jolay amin'ny 7 ora hariva ny morontsiraka ary hiisa miaraka amin'ny fandraisan'ny masoivoho Kolombiana any Frantsa, Federico Renjifo, ary ny filohan'ny ProColombias, Felipe Jaramillo.
Ny tapany faharoa tamin'ny taona France-Colombia dia nanomboka tamin'ny volana jona lasa teo taorian'ny fitsidihan'ny fanjakana ny filoha Kolombiana, Juan Manuel Santos, ho an'ny Forum ara-toekarena Kolombia France natao tany Bercy.
Avy eo dia tonga ny fahombiazan'ny fandraisana anjaran'i Kolombia amin'ny maha firenena vahiny ao amin'ny Mode City, foara fanaovana akanjo lava sy akanjo lava indrindra any Eoropa, miaraka amina delegasiona orinasa 23 tarihin'i ProColombia izay nitokana ny sasany amin'ireo làlambe.
Esteban Cortázar dia nitondra ny votoatiny Kolombiana tao amin'ny fivarotana Colette angano, iray amin'ireo fampisehoana malaza indrindra tany Paris ekena ho mpamokatra fironana, any Rue Saint Honoré. Cortázar dia nisafidy tsara ny tolotra azo ahondrana any Kolombia, tolotra azo aondrana, toy ny asa-tanana, kojakoja, sakafo ary vatomamy, ary koa famoriam-bola noforoniny.
Anisan'ireo hetsika natolotry ny ProColombia tamin'ity taona ity ny Maison & Objet Fair (8 hatramin'ny 12 septambra), ny Mipcom Fair (16 hatramin'ny 19 Oktobra), ny Chocolate Hall of Paris (Nanomboka ny 28 Oktobra hatramin'ny 1 Novambra), ary ny orinasa Macrorrueda fihaonambe tany Paris (17 sy 18 Oktobra).
Ny fandraisan'anjaran'i Kolombia dia tarihin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina, sy ny talen'ny teknikan'ny Vaomiera misahana ny fifandraisan-davitra izay tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny Taona France-Colombia 2017, ary koa ny kaomisera jeneraly, natolotry ny governemanta Kolombiana, Fabián Sanabria.
Ny Kaomisiona misahana ny distrika dia noforonin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny, ny ministeran'ny varotra, ny indostria ary ny fizahan-tany; Ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Sampan-draharahan'ny fiadidian'ny Repoblika. Toy izany koa, izy dia tohanan'ny mpiara-miasa amin'ny fanjakana, toa ny ProColombia sy ny Masoivoho Kolombia any Frantsa, ary ireo mpanohana ara-panjakana sy tsy miankina an'ny sehatry ny andrimpanjakana, orinasa ary haino aman-jery.
Amin'ny raharaham-bahiny frantsay, ny ekipa manoloana ity asa ity dia tarihin'ny kaomisera jeneraly, Anne Louyot, ary ny Ivon-toerana frantsay, masoivohon'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny ho an'ny diplaomasia ara-kolontsaina, izay efa telopolo taona mahery izay no nanao ny hetsika an'ny Cultural Seasons (Saisons culturelles), izay amin'ity fanontana ity, dia tohanan'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny fampandrosoana iraisam-pirenena; Ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ambony ary ny fikarohana siantifika; Ny minisiteran'ny tanàna, ny tanora ary ny fanatanjahantena; Ny Minisiteran'ny Fambolena, Agri-sakafo ary ala, ny Masoivohon'i Frantsa any Kolombia ary ny Network of Alliances French of Colombia.
Saber dia nanonona ny filohan'ny Solutions Hospitality vaovao
Association of British Professional Conference Organizers dia mihaino mpikambana, mifantoka amin'ny soatoavina